October 29, 2017 myanmarnine Leaveacomment ဗဟုသုတ
မှတ်မှတ်ရရ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)တွင် ဓမ္မာစရိယ (ဘီအေ) တန်းနောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်နေစဉ်ကဖြစ်၏။ ဘွဲ့ယူစာတမ်းရေးတင်ရန်အတွက် ပရင်တာတလုံးမဖြစ်မနေလို့အပ်နေ၍ အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတပါးနဲ့ ပေါင်းပြီး ပရင်တာတလုံးဝယ်ရန် ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေးလမ်းက ကွန်ပျူတာဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ၀င်လိုက်ကြ၏။
ဆိုင်ထဲတွင် လူများများစားစားမတွေ့ရပဲ ဈေးဝယ်သူအချို့နဲ့ ၀န်းထမ်းဒကာမလေးတယောက် ၊ နောက် ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ထိုင်နေသည့် ဆိုင်ရှင်ဟုထင်ရသည့် အသက် ၃၀ ကျော် ၄၀ ၀န်းကျင် ခန့် မျက်နှာထားခပ်တင်းတင်း ဒကာမတယောက်တို့သာရှိ၏။
၀န်ထမ်းဒကာမလေးက တခြားဈေးဝယ်သူတို့ကို ပစ္စည်းပြနေရ၍ မိမိတို့ထံသို့ မလာနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ပိုင်ရှင်ဒကာမကြီးက ထိုင်ရာမှထလာပြီး“ဦးဇင်းလေးတွေ ဘာဝယ်ချင်လို့လဲဘုရား၊ တပည့်တော်က အပျိုးကြီးဆိုတော့ ဆိုင်မှာ ၀န်ထမ်းသိပ်မထားဘူး”“ပစ္စည်းမှန်၊ဈေးမှန်ဖို့တော့ တာဝန်ယူတယ်ဘုရား၊ တပည့်တော်က အပျိုကြီးဆိုတော့ ဈေးအရမ်းကြီးတင်မထားသလို ပစ္စည်းအတုလဲ မတင်ဘူးဘုရား”“၀ယ်မဲ့ ပစ္စည်းကိုတော့ သေခြာ စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးမှ ၀ယ်ပါဘုရား၊ တပည့်တော်က အပျိုကြီးဆိုတော့ အလုပ်ရှုပ်လို့ ပြန်လဲမပေးဘူးဘုရား”ဟုမဆီမဆိုင် သူအပျိုကြီးဖြစ်ကြောင်းကို နားကြားမြင်းကပ်အောင် အဆက်မပြတ်ကြော်ညာဝင်နေသည့်လေ၏။“ပရင်တာလေး ကြည့်ချင်လို့ပါ ဒကာမကြီး”မိမိ၏ “ဒကာမကြီး”ဟုဆိုသော စကားကြောင့် အပျိုကြီးခမြာ မျက်နှာပျက်သွားပြီး“ဦးဇင်းလေးတွေကလဲ တပည့်တော်က အပျိုးကြီး ဆိုတော့ သူများအထင်မသေးအောင် ခတ်တန်းတန်းနေ လို့ပါ အသက်က ၄၀ တောင်မပြည့်သေးပါဘူး ၊ ဦးဇင်းတို့နဲ့ တပည့်တော် အသက်သိပ်မကွာလောက်ပါဘူး၊ဒကာမလေးလို့ မခေါ်ချင်တောင် ဒကာမလို့ခေါ်လို့ရပါတယ် ” ဟု အပျိုကြီး ဋီကာချဲ့နေပြန်လေတော့၏။
မိမိလည်း အမြင်ကပ်လှတာမို့“ဟာ… ဒကာမအကြီး…ကြီး ကလဲ အသက်ကြီးလို့ မျက်မှန်ပါဝါထပ်တိုးရတော့မယ်နဲ့တူတယ်၊ ဦးဇင်းက ခုမှ ၂၄-နှစ်ပဲရှိသေးတာ ၊ဘယ်ကလာသိပ်မကွာရမှာလဲ၊ သားအမိလောက် ကွာတယ်”ဟုဘုဆပ်ဆပ်ပြန်၍ ပက်လိုက်ရာ အပျိုကြီးမျက်နှာ လေဖြတ်ထားသလို မဲ့ရွဲ့သွားပြီး“ဟင်း ..ကိုယ်တော်တွေမို့ မပြောလိုက်ချင်တော့ဘူး၊ အသက်လေး (၂၀) နီးပါးလောက်လေးကွာတာကို မစာမနာပြောရက်တယ်၊ လူမှုရေးလဲနားမလည်၊ စာနာရကောင်းမှန်းလဲ မသိဘူး၊ ဘယ်သိပါလဲ ဘုန်းကြီးပါဆိုမှ စာနာတတ်တဲ့ နှလုံးထား သော့ခတ်ထားတာကို”စသည့်ဖြင့် မကြားတကြား မေတ္တာပွား၍နေပါတော့သည်။
မိမိတို့လည်း အပျိုကြီးဖြစ်အင်ကိုတွေ့ပြီး စိတ်ထဲကကျိတ်ရယ်နေမိလေ၏။ အပျိုကြီးလဲ ပရင်တာတလုံးကို ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးယူလာပြပြီး ၊မတတ်သာတဲ့ အသံဟန်ပန်နဲ့ စာပြန်ပြသလိုရှင်းပြ၏၊ မိမိတို့လဲ ဈေးကြီးလို့ နောက်တလုံးပြပါ၊ ပုံစံမကြိုက်လို့၊ ကာလမကြိုက်လို့ စသည်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်မတွေ့သဖြင့် တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးရွေးနေရာ၊ ကြာလာတော့ အပျိုကြီးက စိတ်မရှည်တဲ့ လေသံနဲ့၊“ကဲ့ …. ဦးဇင်းအကြီးကြီးတွေ ရွေးနေတာလဲ တစ်ဆိုင်လုံးကုန်တော့မယ်၊ နောက်ရွေးဖို့ လူပဲကျန်တော့တယ်ဘုရား၊ ဦးဇင်းတို့ ဒီလောက် ချေးများ။အရွေးများလို့ မိန်းမ မရပဲ ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာ” ဟုတွယ်လေတော့၏။ဒီတော့မိမိလည်း ဗီဇကတားမရတော့ပဲ“ အောင်မယ်……. ဒကာမအကြီး ..ကြီးပဲ ..မကြိုက်ရင်ပြန်လဲမပေးဘူး ၊စိတ်ကြိုက်ရွေးဆိုလို့ ရွေးနေတာလေ၊ ၀ယ်ပြီးလို့ မတော်ပျက်သွားရင် ဒီဆိုင်ကိုထပ်လာပြီး ပြင်လိုက်၊လဲလိုက်လုပ်နေရရင် ၊ ဒကာမအကြီး….ကြီး နဲ့ ဖူးစာဆုံနေမှာစို့လို့ရွေးနေတာဗျ၊ ”“သူများကျ ချေးများလို့ ဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်လေး ဘာလေးနဲ့၊ ဒကာမအကြီး …..ကြီးလဲ ၊ ခုလိုဆက်ဆံရေးကျဲ၊ အပြောဆိုးလို့ အပျိုကြီးဖြစ်နေတာဗျ သိလား”ဟုချဲလိုက်လေရာ အနားမှာဈေးဝယ်နေသည့် ဒကာမတဦး ရယ်ကြဲကြဲနဲ့၊“ ဘုန်းကြီးရော၊ အပျိုကြီးရော ဘ၀တူတွေပါဘုရား၊ အတူတူနဲ့အနူးနူး၊ ဘူ ဘူချင်း တပေါက်မစွန်းချင်ပါနဲ့၊ နှုတ်ခမ်းပဲ့အချင်းချင်း မီးမှုတ်မနေကြပါနဲ့ ဘုရား၊ရန်ဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ ကြာရင် သံယောဇဉ်ဖြစ်နေဦးမယ်နော် ”ဟုသြဘာပေးလေရာ အပျိုကြီးလည်း မိမိကိုမျက်စောင်းတချက်ထိုးပြီး“ကန်တော့ဆွမ်းပါ ဘုရား”လို့ဆိုကာ အရှက်လွန်သွားလေသလားတော့မပြောတတ်ပေ၊ အယောင်ယောင် အမှားမှားနဲ့ ပရင်တာတွဲတဲ့ ၀ါယာကြိုကို ပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့ပြီး အခန်းထဲဝင်ပြေးလေတော့၏။
မိမိလည်း “ကြာရင်” ဆိုတဲ့ အသံကိုနားထဲအဖန်ဖန်ကြားယောင်ပြီး သုတ်ချေတင်လှည့်ပြေးခဲ့ရ၏။ ထိုအချိန်မှစ၍ အနှီးအပျိုကြီးဆိုင်တည်ရှိရာ ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေးလမ်းသို့ မရောက်သည်မှာ ယနေ့တိုင်ပင်ဖြစ်၏……။
(ဘ၀အမမောကြော၊ တခဏ ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေလျော့ နိုင်ကြပါစေ)
Credit :ဓမ္မ၀ီရ အရှင်တေဇနိယ (ဗုဒ္ဓဂယာ၊အိန္ဒိယ)
မှတျမှတျရရ ဗုဒ်ဓတက်ကသိုလျ(ရနျကုနျ)တှငျ ဓမ်မာစရိယ (ဘီအေ) တနျးနောကျဆုံးနှဈတကျရောကျနစေဉျကဖွဈ၏။ ဘှဲ့ယူစာတမျးရေးတငျရနျအတှကျ ပရငျတာတလုံးမဖွဈမနလေို့အပျနေ၍ အတနျးဖျောသူငယျခငျြးတပါးနဲ့ ပေါငျးပွီး ပရငျတာတလုံးဝယျရနျ ကွညျ့မွငျတိုငျ ညစြေးလမျးက ကှနျပြူတာဆိုငျတဈဆိုငျသို့ ၀ငျလိုကျကွ၏။
ဆိုငျထဲတှငျ လူမြားမြားစားစားမတှရေ့ပဲ စြေးဝယျသူအခြို့နဲ့ ၀နျးထမျးဒကာမလေးတယောကျ ၊ နောကျ ငှရှေငျးကောငျတာတှငျထိုငျနသေညျ့ ဆိုငျရှငျဟုထငျရသညျ့ အသကျ ၃၀ ကြျော ၄၀ ၀နျးကငျြ ခနျ့ မကျြနှာထားခပျတငျးတငျး ဒကာမတယောကျတို့သာရှိ၏။
၀နျထမျးဒကာမလေးက တခွားစြေးဝယျသူတို့ကို ပစ်စညျးပွနရေ၍ မိမိတို့ထံသို့ မလာနိုငျပေ။ ထို့ကွောငျ့ ပိုငျရှငျဒကာမကွီးက ထိုငျရာမှထလာပွီး
“ဦးဇငျးလေးတှေ ဘာဝယျခငျြလို့လဲဘုရား၊ တပညျ့တျောက အပြိုးကွီးဆိုတော့ ဆိုငျမှာ ၀နျထမျးသိပျမထားဘူး”
“ပစ်စညျးမှနျ၊စြေးမှနျဖို့တော့ တာဝနျယူတယျဘုရား၊ တပညျ့တျောက အပြိုကွီးဆိုတော့ စြေးအရမျးကွီးတငျမထားသလို ပစ်စညျးအတုလဲ မတငျဘူးဘုရား”
“၀ယျမဲ့ ပစ်စညျးကိုတော့ သခွော စိတျကွိုကျရှေးပွီးမှ ၀ယျပါဘုရား၊ တပညျ့တျောက အပြိုကွီးဆိုတော့ အလုပျရှုပျလို့ ပွနျလဲမပေးဘူးဘုရား”
ဟုမဆီမဆိုငျ သူအပြိုကွီးဖွဈကွောငျးကို နားကွားမွငျးကပျအောငျ အဆကျမပွတျကွျောညာဝငျနသေညျ့လေ၏။
မိမိ၏ “ဒကာမကွီး”ဟုဆိုသော စကားကွောငျ့ အပြိုကွီးခမွာ မကျြနှာပကျြသှားပွီး
“ဦးဇငျးလေးတှကေလဲ တပညျ့တျောက အပြိုးကွီး ဆိုတော့ သူမြားအထငျမသေးအောငျ ခတျတနျးတနျးနေ လို့ပါ အသကျက ၄၀ တောငျမပွညျ့သေးပါဘူး ၊ ဦးဇငျးတို့နဲ့ တပညျ့တျော အသကျသိပျမကှာလောကျပါဘူး၊ဒကာမလေးလို့ မချေါခငျြတောငျ ဒကာမလို့ချေါလို့ရပါတယျ ” ဟု အပြိုကွီး ဋီကာခြဲ့နပွေနျလတေော့၏။
“ဟာ… ဒကာမအကွီး…ကွီး ကလဲ အသကျကွီးလို့ မကျြမှနျပါဝါထပျတိုးရတော့မယျနဲ့တူတယျ၊ ဦးဇငျးက ခုမှ ၂၄-နှဈပဲရှိသေးတာ ၊ဘယျကလာသိပျမကှာရမှာလဲ၊ သားအမိလောကျ ကှာတယျ”
ဟုဘုဆပျဆပျပွနျ၍ ပကျလိုကျရာ အပြိုကွီးမကျြနှာ လဖွေတျထားသလို မဲ့ရှဲ့သှားပွီး
“ဟငျး ..ကိုယျတျောတှမေို့ မပွောလိုကျခငျြတော့ဘူး၊ အသကျလေး (၂၀) နီးပါးလောကျလေးကှာတာကို မစာမနာပွောရကျတယျ၊ လူမှုရေးလဲနားမလညျ၊ စာနာရကောငျးမှနျးလဲ မသိဘူး၊ ဘယျသိပါလဲ ဘုနျးကွီးပါဆိုမှ စာနာတတျတဲ့ နှလုံးထား သော့ခတျထားတာကို”
စသညျ့ဖွငျ့ မကွားတကွား မတ်ေတာပှား၍နပေါတော့သညျ။
မိမိတို့လညျး အပြိုကွီးဖွဈအငျကိုတှပွေီ့း စိတျထဲကကြိတျရယျနမေိလေ၏။ အပြိုကွီးလဲ ပရငျတာတလုံးကို ဆောငျ့ကွီးအောငျ့ကွီးယူလာပွပွီး ၊မတတျသာတဲ့ အသံဟနျပနျနဲ့ စာပွနျပွသလိုရှငျးပွ၏၊ မိမိတို့လဲ စြေးကွီးလို့ နောကျတလုံးပွပါ၊ ပုံစံမကွိုကျလို့၊ ကာလမကွိုကျလို့ စသညျဖွငျ့ စိတျကွိုကျမတှသေ့ဖွငျ့ တဈလုံးပွီးတဈလုံးရှေးနရော၊ ကွာလာတော့ အပြိုကွီးက စိတျမရှညျတဲ့ လသေံနဲ့၊
“ကဲ့ …. ဦးဇငျးအကွီးကွီးတှေ ရှေးနတောလဲ တဈဆိုငျလုံးကုနျတော့မယျ၊ နောကျရှေးဖို့ လူပဲကနျြတော့တယျဘုရား၊ ဦးဇငျးတို့ ဒီလောကျ ခြေးမြား။အရှေးမြားလို့ မိနျးမ မရပဲ ဘုနျးကွီးဖွဈနတော” ဟုတှယျလတေော့၏။
“ အောငျမယျ……. ဒကာမအကွီး ..ကွီးပဲ ..မကွိုကျရငျပွနျလဲမပေးဘူး ၊စိတျကွိုကျရှေးဆိုလို့ ရှေးနတောလေ၊ ၀ယျပွီးလို့ မတျောပကျြသှားရငျ ဒီဆိုငျကိုထပျလာပွီး ပွငျလိုကျ၊လဲလိုကျလုပျနရေရငျ ၊ ဒကာမအကွီး….ကွီး နဲ့ ဖူးစာဆုံနမှောစို့လို့ရှေးနတောဗြ၊ ”
ဟုခြဲလိုကျလရော အနားမှာစြေးဝယျနသေညျ့ ဒကာမတဦး ရယျကွဲကွဲနဲ့၊
“ ဘုနျးကွီးရော၊ အပြိုကွီးရော ဘဝတူတှပေါဘုရား၊ အတူတူနဲ့အနူးနူး၊ ဘူ ဘူခငျြး တပေါကျမစှနျးခငျြပါနဲ့၊ နှုတျခမျးပဲ့အခငျြးခငျြး မီးမှုတျမနကွေပါနဲ့ ဘုရား၊ရနျဖွဈနတောနဲ့ပဲ ကွာရငျ သံယောဇဉျဖွဈနဦေးမယျနျော ”
ဟုသွဘာပေးလရော အပြိုကွီးလညျး မိမိကိုမကျြစောငျးတခကျြထိုးပွီး
လို့ဆိုကာ အရှကျလှနျသှားလသေလားတော့မပွောတတျပေ၊ အယောငျယောငျ အမှားမှားနဲ့ ပရငျတာတှဲတဲ့ ၀ါယာကွိုကို ပါးစပျထဲထိုးထဲ့ပွီး အခနျးထဲဝငျပွေးလတေော့၏။
မိမိလညျး “ကွာရငျ” ဆိုတဲ့ အသံကိုနားထဲအဖနျဖနျကွားယောငျပွီး သုတျခတြေငျလှညျ့ပွေးခဲ့ရ၏။ ထိုအခြိနျမှစ၍ အနှီးအပြိုကွီးဆိုငျတညျရှိရာ ကွညျ့မွငျတိုငျ ညစြေးလမျးသို့ မရောကျသညျမှာ ယနတေို့ငျပငျဖွဈ၏……။